श्वेतालाई विवाहको शुभकामना दिदै करिश्माले भनिन् - समाजमा जनजागरण कहिलेकाही आफै उदाहरण बनेर पनि दिनुपर्छ Canada Nepal
श्वेतालाई विवाहको शुभकामना दिदै करिश्माले भनिन् - समाजमा जनजागरण कहिलेकाही आफै उदाहरण बनेर पनि दिनुपर्छ
काठमाडौँ । नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी चर्चित अभिनेत्री श्वेता खड्का आज सोमबार विवाह बन्धनमा बाधिँएकी छिन् । उनी प्रेमी विजयन्द्र सिंह रावतसँग आज काठमाडौँको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टमा विवाह बन्धनमा बाधिँएकी हुन्।
धनगढीका विजयन्द्र सिंह रावतसँग आज विवाह बन्धनमा बाधिँएकी श्वेताले विवाहको अघिल्लो दिन अर्थात आइतबार सामाजिक संजालमा एक मनछुने स्टाटस लेखेकी थिइन् । उनले आफुले गरेको यो निर्णय पुरुष प्रधान समाजले स्विकार गर्ला भन्दे प्रश्न पनि गरेकी थिइन् ।
उनको स्टाटसलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न प्रतिक्रियाहरु आएका छन् । यस्तै अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले श्वेतालाई विवाहको शुभकामना दिँदै एक स्टाटस लेखेकी छिन् ।
उनले कतिपय अवस्थामा आफ्ना भावनाहरुलाई पैताला मुनि कुल्चिनु पर्ने स्थिति पनि आउने बताउकी छिन् । उनले श्वेताको विवाह एउटा उदाहरणीय सुरुवात भएको बताएकी छिन् ।
नवीन वैवाहिक जीवनको शुभकामना श्वेता । तिमी वास्तविक जीवनको नायिका हौ भन्दै उनले भनेकी छिन् -
आएको हरेक परिस्थितिको सामना गर्दै ,साथै समाजका मुल्यमान्यतालाइ कायम राख्दै र मान्दै जिवनलाइ हिम्मतका साथ जिउन ठुलो आट चाहिन्छ , येस्तोमा कतिपय अवस्थामा आफ्ना भावनाहरुलाई पैताला मुनि कुल्चिनु पर्ने स्थिति पनि आउँछ । हरेक मानिसको खुसी भएर बाच्न पाउने अधिकार छ ।
पुरुषप्रधान मानसिकता रहेको हाम्रो यो समाजमा , ठुला ठुला आवाजमा कस्तो प्रकारको महिला सशक्तीकरण कुरा गरिरहेकार्छौ हामी ? जो बिचरि अवस्थामा छिन र अरुको सहयोगको अपेक्षा गरेर आँखा तानेर बसेकी छिन !!
या जो हिम्मतका साथ ती सबै समस्याहरुसंग जुधेर आफुलाइ भित्रैबाट सशक्तीकरण गरेर आफ्नो लागि नयाँ बाटोको निर्माण गर्दै छिन ,र यो पनि समाजको अगाडि प्रस्तुत भयेर गर्दैछिन ।
समाजमा जनजागरण कहिलेकाही आफै उदाहरण बनेर पनि दिनुपर्छ ।तिम्रो हिजोको स्टाट्स लेखाइमा भयेको तिम्रा भाव बुझे जस्तो लागेर यी शब्दहरु लेख्दैछु। नवीन वैवाहिक जिवनको शुभकामना स्वेता ❤️ तिमी वास्तविक जीवनको नाइका हौ । 💐
श्वेताले आइतबार सामाजिक सञ्जलामा लेखेको स्टाटस - म: जीवनको नविन यात्रामा 🙏🙏
मंसिर २२, २०७७ सोमवार १९:१५:२३ बजे : प्रकाशित